कञ्चनपुर –चुरे पर्वत शृङ्खलामै रहेको स्वच्छ, सुन्दर र मनमोहक झिलमिला तालको न पानी घट्छ, न बढ्छ । तालको पानी कञ्चन छ । तालको चारैतिर घना जङ्गल भएर पनि पानीमा रुखका पात खसेका भेटिँदैन । न त पानीको कुनै निकास नै भेटिन्छ । छिनछिनमै तालले रङ फेर्ने भएकाले ताल हेर्न आउने पर्यटक मन्त्रमुग्ध हुने गरेका छन् ।
'अप्ठेरो समस्यामा परेका मान्छेहरु आनो मनोकामना लिएर आउँछन्, माता झिलमिलाको दर्शन गरेपछि त्यो मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ,' झिलमिला विकास समितिका उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी लाल बहादुर विष्टले भने।
'सानैदेखि यो ताल देखेको छु, न त यसको पानी कतै निकास हुन्छ, न त कम हुन्छ, बर्खामा थोरै बढ्छ,' समाजसेवी विष्टले भने, 'यो तालमा के शक्ति छ ? कस्तो शक्ति छ ? आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन ।' बिहान, दिउँसो र साँझ तीन पटक तालको पानीको रङ फेरिने गर्छ । बिहान सुनहरा, दिउँसो नीलो र साँझ हरियो रङ देखापर्छ । दैनिक रङ फेरिने भएकाले यसको नाम झिलमिला राखिएको हो ।
महाभारतमा झिलमिला तालको अलौकिक शक्तिको वर्णन गरिएको छ । पाण्डवहरु वनबास गएको समयमा द्रोपतीलाई पानीको प्यास लाग्यो । अर्जुनले रुखमा चढेर पानी भएको ताल देखेपछि एक भाइलाई त्यहाँ पठायो । पानी लिन गएका भाइ फर्केर आएन । त्यसपछि गएका अर्का भाइ पनि फर्केन । सबैको त्यहीँ ज्यान गयो । अन्तिममा युधिष्ठिर आफैं पानी लिन गए । त्यही बेला तालबाट निस्केको अदृश्य शक्तिले युधिष्ठिरलाई प्रश्न सोधे ।
सबै प्रश्नको जवाफबाट सन्तुष्ट भएपछि उनलाई एउटा भाइ जिउँदो माग्न वर माग्न लगाइयो । युधिष्ठिरले भाइ अर्जुनलाई ब्यूँताउन माग गरे । त्यसपछि त्यो अलौकिक शक्ति खुशी भएर युधिष्ठिरका सबै भाइलाई जिउँदो बनाएको कथा छ । 'महाभारतको यो कथाले पनि यो तालमा अलौकिक शक्ति भएको विश्वास दिलाउँछ,' समाजसेवी विष्ट भन्छन्।
यस तालले प्राकृतिक र धार्मिक महत्व बोकेको छ । प्राकृतिक रुपमा चारैतिर जङ्गलले घेरिएको यस तालले दैनिक रङ अदलबदल गरी मन लोभ्याउने गर्छ । दर्शनार्थीले फ्याँकेका अक्षता खान हूल बाँधेर आउने कालो रङ भएका एकनासका जुँगे माछाले समेत पर्यटक ध्यान खिच्छ । काला माछा बाहेक तालमा सर्प पनि देखिने गरेको छ । तालमा दैवीय शक्ति भएको मान्यताका कारण माछा मारेर खाने गरिएको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिकाको मटेनाबाट चुरेको जङ्गल हुँदै दुई घण्टामा ताल पुग्न सकिन्छ । मटेनाबाट गहुँताणी मन्दिर हुँदै ताराकोट भएर झिलमिला पुग्न सकिन्छ । ब्रह्मदेव र कालीताल झरना बाटो भएर ताराकोट हुँदै तालसम्म पुग्ने सडक सँगै पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । मटेनामा ताराकोटसम्म ९ दशमलव ५ किलोमिटर र त्यसपछि डेढ किलोमिटर दूरी उकालो र तेस्रो बाटो पार गरी ताल पुग्न सकिन्छ । दर्शनार्थीको सहजताका लागि सडक बनाउन शुरू गरिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाले तालसम्म पुग्ने मोटर बाटो बनाउने योजना अघि सारेको छ । मटेना हुँदै ताराकोटसम्म पक्की सडक र त्यसपछि डेढ किलोमिटरमा पदमार्ग निर्माण गरी तालसम्म पुग्ने योजना अघि सारिएको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए। 'तालको संरक्षण र प्रचारप्रसार गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने सोचाइका साथ योजना अघि बढाएका छौं,' नगर प्रमुख विष्टले भने, 'यसका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पहलकदमी लिइएको छ ।'
'ताल क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटक र भक्तजनहरुको सुविधाका लागि शौचालय निर्माण, सौर्य उपकरण जडान गरिएको छ,' झिलमिला संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष लाल सिंह विष्टले भने।
भीमदत्त नगरपालिकाले भ्यू टावरका लागि प्रस्ताव गरेको ताराकोटमा यस अघि स्थानीय बासिन्दाका गोठ थिए । चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरिएपछि ती गोठ हटाइएका हुन् । ताराकोटबाट माथि झिलमिला हिँडेपछि माछा मासु खान नपाइने भएकाले ताराकोटलाई वनभोज स्थल बनाउने नगर प्रमुख विष्टको योजना छ ।
मटेनाबाट गहुँताणी मन्दिर हुँदै जङ्गल छिचोलेर जाँदा ताराकोट पैदलै पुगिन्छ । तिल्केनीको बाटो भएर ताराकोट जाँदा कालीनाल झरना देख्न पाइन्छ । त्यहाँबाट हिँडेर ताराकोट हुँदै झिलमिला पुग्न सकिन्छ । डडेल्धुराबाट आउनेले भने परशुराम नगरपालिका न्वाला गाउँको बाटो समात्नु पर्छ । भीमदत्त नगर र डडेल्धुराको परशुराम दुबै नगरपालिका जोड्न दुबै स्थानीय तह एकमत छन् । राजेन्द्रप्रसाद पनेरु,रासस